Qaxooti ka yimi Hungary oo ku wajahan Austria
05 September, 2015(GO)-War ka soo baxay dalka Austria ayaa lagu sheegay in dalkaasi ku wajahanyihiin ku dhawaad 10,000 qof qaxooti ka yimi dalka Hungary oo muddo go'doon ku ahaayeen.
Sargaal sare oo Boliska ah ayaa sheegaya in dadka magan galyo doonka ah ee dalkaasi maanta soo gaarey ay u fidiyeen gar-gaar bini aadanimo iyagoo kaga hortagay goobaha xuduuda ah ee Hungary ku daadisay.
Austria ayaa sheegaysa inay Jarmalka ka wada hadleen sidii dadka loo caawin lahaa, waxaana jira muran xooggan oo ka dhexjira wadama Yurub kaasi ooo ku aadan qaxootigan tira badan ee soo galay wadamadaasi.
Dhinaca kale dowladda Hungary ayaa sheegtay inaysan jiri doonin basas iyo tareeno kale, waxayna caddeysay inay basaska keentay kadib markii dadka ay u lugeeyeen xuduudda Austria, hadana ay xaalada dib u eegayso
Jarmalka ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in dalkiisa ku soo wajahanyihiin qaxooti hor leh.
Cabdi Xaashi oo ka qeybgalaya shir ka furmay Qatar [Sawirro] 09.12.2019. 13:45
Kenya oo ka shaqeynaysa qorshooyin ka dhan ah Al-Shabaab 09.12.2019. 11:41
Nikki Haley: Kanada waxay la macaamishay "shaydaan" 09.12.2019. 11:14
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan [Fahfaahin] 09.12.2019. 09:58
CC Shakuur oo culimada ugu baaqay in aysan la kala safan siyaasiyiinta 08.12.2019. 22:48
Baarlamaanka Puntland oo lacag ugu deeqay gurmadka Gardafuu 08.12.2019. 20:41